Manova ny rom ho an'ny htc g1 | Androidsis
FANOVANA NY ROM AN'NY HTC DREAM NA G1
Ny fanovana ny ROM amin'ny nofy htc na G1 raha vantany vao manana fidirana amin'ny fakany (na mpitantana ao amin'ny Windows) izahay dia tsotra ihany. Ny hany lazaiko eto dia ny fanangonana boky torolàlana sy hevitra nalaina avy www.xda-developers.com y www.htcmania.com
Ny zavatra rehetra ataonao dia eo ambanin'ny andraikitrao sy avy www.androidsis.com Tsy tompon'andraikitra amin'ny fahavoazana mety hitranga izahay.
Araka ny nolazaiko tany am-piandohana dia manomboka amin'ny telefaona miaraka amin'ny fidirana amin'ny root isika (torolàlana ny fomba fanaovana azy eto)
Asaivo fenoina tanteraka ny bateria.
Misy kinova ROM tsy ofisialy 3 izao, ny iray avy Jesosy freak, Dudes y Hakuro. Miorina amin'ny fanovana ROM Dudes ity boky torolalana ity.
1 mankany Dudes ary misintona ny rakitra ROM sy ny rakitra OTA amin'ny radio izahay.
2º Ao amin'ny telefaona no hijerentsika izay radio ananantsika dia mankany amin'ny Menu isika - Fikirana - Momba ny telefaona - kinova Baseband na Basement. Raha manamarina isika fa mitovy ilay kinova dia mankany amin'ny teboka 4 isika, raha ambany dia mankany amin'ny 3 isika
3º Mametraka Radio OTA. Ampidirinay amin'ny solosaina ny rakitra, alainay amin'ny karatra SD (tsy maintsy apetraka amin'ny endrika FAT32), omenay anarana vaovao farany.zip ary vonoinay ny telefaona. Izahay dia mamerimberina amin'ny mode Recovery na izay mitovy amin'ny alàlan'ny fanindriana ny lakilen'ny trano ary miaraka amin'izay koa ny lakilen'ny herinaratra.
Rehefa afaka kelikely, hiseho ny sary famantarana ny mpandraharaha ary rehefa afaka segondra vitsy ny kaody dia hiseho eo amin'ny efijery. Rehefa vita dia hanana efijery misy safidy maromaro hisafidianana isika.
Tsindrio ny bokotra ALT + S ary ho hitantsika fa manomboka miorim-paka ny ROM, hiseho ny bara fandrosoana izay manondro ny sisa tavela. Rehefa vita dia hiseho eo amin'ny efijery ny baiko hanery ny bokotra HOME + BACK, izany hoe ny lakilen'ny trano + ny bokotra zana-tsipika aoriana.
Hiverina indray ny telefaona ary hipoitra ny efijery an-trano dia hipoitra. Raha miverina amin'ny Menu isika - Fikirana - Momba ny telefaona - kinova Baseband na Basement dia ho hitantsika fa nanavao isika.
ROM fametrahana faha-4. Napetraka mitovy amin'ny OTA Radio izy io. Sintomy ny rakitra, adikao, ovao ny anarany, vonoy ny telefaona, atodiho amin'ny fomba fanarenana, tsindrio Alt + S, ary farany Home + Back.
Efa manana ny ROM vaovao isika.
Manantena aho fa manampy izany. Raha misy sosokevitra rehetra, fisalasalana na fanazavana, tsidiho ny www.androidsis.com
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Rom » FANOVANA NY ROM AN'NY HTC DREAM NA G1
Bufff, tsy haiko raha lasa lanja taratasy ny nofiko. Ny zava-misy dia rehefa nahazo boot (HTC Dream avy amin'ny Movistar miaraka amin'ny 1.5 toy ny mahazatra) rehefa mamafa sy mametraka ny cyanogen rom novaina izay eto (supermatel raha tadidiko fa diso) ny Dream rehefa mitodika dia tsy mihoatra ny sarin'ny logo an'ny Movistar! biriky ve? Tsy hitako izay hatao! farafaharatsiny miditra ny maody fanarenana sy ny fastboot, fa rehefa averinao amin'ny laoniny izy io dia tsy mandalo ny efijery misy ny sary famantarana Movistar izay lazaiko anao. Afa-po aho amin'ny fiverenako amin'ny 1.5 ofisialy, misy torohevitra ve? Misaotra betsaka mialoha, tsy hitako izay hatao ..
Mandra-pahoviana no avelanao hiandry azy io hanomboka? Manana fidirana amin'ny finday ve ianao?
buff! 2 ora mahery sisa no namelako azy! Eny, manana faka aho!
Inona no rom napetrakao? Raha afaka miditra amin'ny mode fastboot sy recovery ianao dia tsara ny telefaona saingy tsy misy rom napetraka
Salama, azafady, izany ihany no mahazo ahy, fa tsy afaka miditra amin'ny fastboot na fanarenana aho, inona no azoko atao? : S
Ahoana ny fomba hidirana amin'ny rool amin'ny T-Mobile G1
NY ANDROID MARKET IZAO AZA ATAO SPAIN